Gabdho diiddey inay ka qaybqaataan qoob-ka-cayaar diintooda awgeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabdho diiddey inay ka qaybqaataan qoob-ka-cayaar diintooda awgeed
La daabacay torsdag 1 augusti 2013 kl 15.12
Saddex gabdhood oo ku nool degmada Pajala ayaa diiddey in ay qaybqaataan xiisadda muusigga iyo qoob-ka-cayaarka maadaama ay taasi ka soo horjeedo aamminaadooda. Sidaasna waxaa laga soo xigtay maxkamadda rafcaanka ee degmada Sundsvall. In muusig lagu cayaaro wuxuu ka soo horjeedaa caqiidada qoysaskoodu aamminsan yihiin.
Dhanka kale Hay’adda dugsiyada ayaa si ka duwan u aragta maadaama ay ardayda dugsiyada hoose ku khasban yihiin in ay ka qaybqaataan dhammaan xiisadaha, iyadoo aan tixgelin la siineyn diinta iyo aragtida ardayga ama waalidkiisa.
Maamulayaasha dugsiyadu waxay weli xaq u leeyihiin in ay ardayda mararka qaarkood ruqsad u siiyaan in ay ka joogaan xiisadaha, laakiin waxay taasi ku xiran tahay in ay ardaydu mar dambe maaddada ka gaaraan heerkii laga doonayey.
Waxaa halkaa ka cad in maxkamadda rafcaanka iyo hay’adda dugsiyadu ku kala aragti duwan yihiin arrintaan. Claes-Göran Aggebo oo ka socda guddi hay’adda dugsiyada u qaabbilsan xiisadaha iyo casharada ayaa ka yiri:
- Waxaan u aragnaa in aysan sharciga waxbarashada meelna kaga qornayn in ardayda ruqsad loo siin karo in ay gebi ahaanba ka joogaan xiisadda qoob-ka-cayaarka oo ka mid ah maaddooyinka isboortiga iyo caafimaadka. Sida sharciga ku cadna looma joojin karo dhaqdhaqaaqyo diimeed noocay doonaan ha noqdeene.
Xaqiiqada ururka caqiidada Laestadinism
Laestadianism waa urur caqiido ah oo ka tirsan kaniisadda masiixiga. Waxaana bilaabay nin lagu magacaabi jirey Lars Levi Laestadius. Dadka ugu badan oo aamminsanina waxay ku nool yihiin degaanada Tornedalen iyo Österbotten oo ku yaal waqooyiga Iswiidhen. Waxyaalaha lagu yaqaan ururkaan diimeed waxaa ka mid ah in ay isugu yimaadaan kulamo ay ruuxooda ku safeeyaan iyo in ay diidaan ka qaybqaadashada dhammaan waxyaalaha la xiriira dhaqamada casriga ah.